Abaxhasi beminqwazi kunye neFektri-abaThengi beHats baseChina
Umnqwazi ogqibeleleyo we-unisex trapper, wenza ifom ye-100% yokwenyani ejongene nomgangatho ophakamileyo wesikhumba semvu. Esinye sezona zinto zishushu zendalo onokuzinxiba kwaye zomelele kakhulu, Iindlebe zingabotshwa ngaphezulu ukuba azisetyenziswanga.Ingqayi yesikhumba segusha eyenzelwe iinjongo ezininzi Inqaku lenqaku: Inombolo ye-HW-012M ● Bopha ngaphezulu okanye hayi ● Umbala: Tan.brown kunye neminye imibala ● Wide icocekile ● Yenziwe ngobunono kwaye ilungile
Yenziwe ngokucheba iigusha eziphindwe kabini, uSofe kwaye uhlala ixesha elide. Eyilwe ngeendlebe ezinokubotshwa phantsi kwesilevu okanye ngaphezulu kwentloko. Umnqwazi wokuqala wezikhumba zeegusha, iminqwazi yokuloba ilungile ukugcina iindlebe zakho zifudumele. ● Inqaku akukho: HW-011M ● iindlebe ezindlebeni ● Umbala: Camel.brown kunye neminye imibala ● Ucocekile ngokubanzi ● Yenziwe ngobunono kwaye ilungile, Intlawulo yobukhulu
Ibonisa isitayile somnqwazi esiqhelekileyo, lo mnqwazi unganxitywa ngeendlela ezininzi ukuze uhlale ukhululekile ngelixa ujongeka ugqibelele, i-visor kunye neendlebe ezindlebeni zinokugoqwa zize ezantsi. Yenziwe ngeprimiyamu yobuso obuphindwe kabini ngesikhumba segusha, uboya obungqingqwa bokucheba ngaphakathi kumngundo ukuya kwimo yentloko yakho eyenza ukwambathiswa kwendalo. Eyona nto ilungele amaxesha okunxiba okanye okungaqhelekanga. ● Inqaku: Inqaku le-HW-010M ● i-visor inokugoqeka phezulu nasezantsi ● Umbala: Camel.brown kunye neminye imibala ● Ukucoceka ngokubanzi ● Kuyilwe ngobunono kwaye kufanelekile, Ubungakanani cha ...
isitayile somnqwazi esiqhelekileyo saseRussia, Lo mnqwazi wenziwe nge-100% eyomileyo nefudumeleyo yokucheba ngesikhumba segusha esingaphandle esuede. Uyilo olulula. Akukho zinkcukacha zinkulu malunga nohlobo lwangaphandle ● Inqaku akukho: HW-008M ● Umbala: Camel.brown kunye neminye imibala ● Ucocekile ngokubanzi ● Yenziwe ngobunono kwaye ilungile, Intlawulo yesayizi
iminqwazi yamanenekazi eemfele zeebhokhwe ezinombhinqo wesikhumba
Le Hat yenziwa kumgangatho wokuqala wesikhumba semvu esiphindwe kabini, uboya obungqingqwa obuchetyiweyo ngaphakathi kumngundo ukuya kwimo yentloko yakho eyenza ubushushu bendalo. Uyilo olulula. Akukho zinkcukacha, iflegi encinci evaliweyo ihambisa inqaku lobuhle kunxibo lwakho lobusika. Ukubonisa umphetho ongenakwenziwa ngokwesiko, tshatisa ibhanti yesikhumba, nayo ungayirhoxisa. indibaniselwano egqibeleleyo, ilungele ixesha elinxibayo okanye elingaqhelekanga. ● Inqaku akukho: HW-007M ● 100% itakane lokwenene ● Umbala: Camel.brown neminye imibala ● Ucoceko olubanzi ● ...
amanenekazi anxibe iminqwazi yesikhumba segusha enoboya ngaphandle kweenkcukacha
Yenziwe ngohlobo kunye neshushu semvana, ethambileyo kunye nokomelela. Iintsinga zayo ziyaphefumla, zisebenza njenge thermostat yendalo yomzimba wakho. Olu luyilo lwesitayile sinesithsaba esimile okweqhekeza sedome, dibanisa uboya obunxibelelene nemisonto, kwaye ngebhendi ebanzi nayo inendibaniselwano egqibeleleyo, ilungele ixesha elinxibayo okanye eliqhelekileyo. ● Inqaku akukho: HW-006M ● 100% itakane lokwenene ● Umbala: Camel.brown kunye neminye imibala ● Ucocekile ngokubanzi ● Yenziwe ngobunono kwaye ilungile, Intlawulo yobukhulu
Isitayile kunye neklasikhi, Yenziwe ngofele lwegusha lwe-merino, olufudumeleyo nolunokugqwesa, lithambile kodwa lomelele Yenza iminqwazi iphefumle. Esi sitayile sinesithsaba esinye kunye neploppy ethambileyo, Onke amacwecwe agqunywe ngokucocekileyo. Eyona ilungele amaxesha okunxiba okanye okungaqheleki ebusika ● Inombolo yenqaku: HW-005M ● 100% yeegusha zokwenene ● Umbala: Camel. ibrown kunye neminye imibala ● icocekile ngokubanzi ● Yenziwe ngobunono kwaye ilungile, Intlawulo yobukhulu